Aktarada aan la jebin karin Kimmy Schmidt ayaa ku soo biirtay Apple | Wararka IPhone
Aktarada aan la jebin karin Kimmy Schmidt ayaa ku biiraya Apple
Apple waxay in muddo ah ka shaqeyneysay waxa u noqon doona adeegiisa baahinta fiidiyowga, si ay isugu daydo u istaag bedel ahaan Ilaaha awooda leh Netflix, in kastoo si loo gaadho dhererkaas, sannado badan ayaa weli laga gudbaa oo nuxurka iyo rukhsadaha u gaarka ah ee aad haysataa aad u ballaadhan yihiin.
Muddo sannad ka badan, Apple waxay saxiixday tiro badan oo jilaayaal ah, atirishooyin, soo saareyaal iyo agaasimayaal shineemo iyo telefishan si loo abuuro nuxur asal ah, nuxur meesha galmada, rabshadaha iyo erayada dhawaaqa xunba gebi ahaanba la mamnuucay, maadaama maadooyinka oo dhami ay awoodaan in lagu soo bandhigo Dukaan kasta oo Apple ah, sida ay qabaan dadka la xidhiidha qabyo qoraalka.
Saxiixii ugu dambeeyay ee shirkaddu sameysay, waxaan ka helnay atariishada Jane Krakowski, mid ka mid ah atariishooyinka qeybta ka ah jilaayaasha taxanaha Netflix ee jabiyey Kimmy Schmidt. Jane sidoo kale waxay ka mid ahayd jilayaashii taxanaha NBC ee 30 Rock. Jane waxay ka mid noqon doontaa jilayaasha taxanaha 'Dickinson', oo ah taxane na tusaya qarnigii XNUMXaad iyada oo loo marayo abwaanka Emily Dickinson.
Sida laga soo xigtay isla macluumaadka, Jane ayaa taxanaha ku matali doonta abwaanka hooyadiis, taxane ah oo bilaabay shaqo soo saarid bishii Maajo ee la soo dhaafay, sida aan kugula socodsiinay taleefanka iPhone News Apple wuxuu hadda ka shaqeynayaa 20 taxane asal ah, taxane ah oo ku jira heerar kala duwan oo horumarineed.
Qaar ka mid ah agaasimayaasha iyo soo saareyaasha oo saxiixay ballanqaadka Apple ee qaybtaan waxaan ka helnay: Steven Spielberg, M. Night Shyamalan, JJ Abrams iyo Damien Chazelle iyo kuwo kale.
Hadda taariikhda la filayo lama oga si loo qarxiyo adeeggan fiidiyowga ee qulqulaya ee bulshada, adeeg ah, haddii aan iska indhatirno xanta ugu wanaagsan, waxay arki kartaa iftiinka maalinta bisha Maarso ee sanadka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Aktarada aan la jebin karin Kimmy Schmidt ayaa ku biiraya Apple
Khariidadaha Google ayaa ku daraya isku dheelitirnaan la'aanta wadada lugta ama baaskiilka